परिवार खुसि पार्ने सपना बोकेर २२ दिन अगाडी साउदी पुगेका पाल्पाका २२ वर्षीय मोहनको सडक दुर्घटनामा परि निधन, खबर सुनेपछि नेपालमा आमाको बेहाल ! « Etajakhabar
परिवार खुसि पार्ने सपना बोकेर २२ दिन अगाडी साउदी पुगेका पाल्पाका २२ वर्षीय मोहनको सडक दुर्घटनामा परि निधन, खबर सुनेपछि नेपालमा आमाको बेहाल !
प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७६, बुधबार ०९:३८
साउदी अरबमा ज्या न गुमाएका पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–४ देवीनगरका २२ वर्षीय मोहन जर्घाको श व अहिलेसम्म पनि घर ल्याउन नसकिएको परिवारले जनाएको छ । काम सकेर साइकलमा कोठातर्फ फर्कंदै गर्दा कारको ठक्करबाट गत पुस २३ गते ज्या न गुमाएका जर्घाको श व अहिलेसम्म पनि घरमा ल्याउन नसकिएको मृ तकका दाजु कृष्ण जर्घाले गुनासो गर्नुभयो ।
आफूले चिनेजानेका र सहयोग गर्नेखालको कोही नभेटिएकाले श व कसरी ल्याउने थाहा नभएको कृष्णको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “भाइको निधनको खबर सुनेलगत्तै मलेसिया पुगेको २७ दिनमै घर आए, घरमा आउँदा आमाको अवस्था बेहाल छ, भाइको श व कसरी झिकाउने प्रक्रिया केही थाहा छैन्, अलपत्र छौँ ।”
मोहन कामको सिलसिलामा काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको फजल इन्टरनेशनल प्रालिमार्फत साउदी अरबको रियाद पुग्नुभएको थियो । २२ वर्षीय मोहनको नेपालबाट विदेश पुगेको २२ दिनमै ज्या न गएको थियो ।